Sales & Marketing Executive (Male) (For Naypyitaw Only)
-အစိုးရရုံးများနှင့် ကောင်းစွာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
-ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီင်္းသူ ဖြစ်ရမည်။
-ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိပြီး တက်ကြွစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
-အသက် (၂၂)နှစ် မှ (၃၀)နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: sales & marketing executive (male) (for naypyitaw only). 155 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ